ကြားနာခြင်း-hearing-both-side | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြားနာခြင်း-hearing-both-side
Posted by yan lay on Mar 14, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 10 comments
Hearing both side အကြောင်း ဆွေး နွေး ပါ မည် သာမန် အား ဖြင့် Hearing ဆိုသည်မှာ နား ထောင် သည် ဟု ဆိုပါ မည် ၊မှန် ပါ သည် ဒိထက် ပို ကျယ် ပြန့် ပါ သည် နား ထောင် သည်ဆိုရာ တွင် ၂ ဘက် ကြားနာ ခြင်း ကို ဆို လို ပါ သည် ။ Hearing သည် ဘယ် လောက် အရေး ကြီး ကြောင်း လူ့ လော က သ ဘာ ၀ အရ သိ နိုင် ပါ သည်၊ တစ် ဘက် ကြား ဖြင့် မ ဆုံး ဖြတ် ရာ ၂ ဘက် ကြားနာ သင့် ကြောင်း ၊ ရှေး အစဉ် အဆက် ဆို ရိုး များ ရှိ ပါ သည်၊ ( ကြီးကြီး ကျယ် ကျယ် ပြောရ ရင်ဖြင့် ) ENGLAND နိုင် ငံ ၏် အ မှု တစ် ခု တွင် ဆုံး ဖြတ်သူ တရားသူ ကြီး တစ် ဦး ၏ မှတ် ချက် အရ (နာမည် ကြီးပါ သည်) ဘုရားသခင်(God) သည် အာ ဒန် အား တား မြစ် ထား သော အ သီး (Forbidden fruit) စား မှု ဖြင့် စစ် ဆေး ရာ တွင် ကြားနာ ခွင့် ပေး ခဲ့ ကြောင်း ၊ အဆို ပါ အချိန် တည်း က Hearing ရှိ ခဲ့ ကြောင်း ၊ မည်သည့် အရာ ကို မှ တစ် ဖက် တည်း ကြည့် ရူ် ကိုယ့် ကိုယ် ပိုင် အမြင် ဖြင့် တစ် ဖက် သတ် မဆုံး ဖြတ် သင့် ကြောင်း၎င်း ၏ နာ မည် ကျော် စီရင် ချက် ၌ ထည့် ဖေါ် ပြ ခဲ့ ပါ သည်၊ ကျ နော် ဆို လို ချင် တာ က ယ ခု လူ တစ် ချို့ ၌ တစ် ဘက် တည်းသာ နားထောင် ပြီး တစ် ဘက် သတ် ကောက် ချက် ချ ကာ ပြော ဆို နေ သည် ကို တွေ့ နေ ရ ပါ သည် ၊ အပြစ် မပြော လို ပါ ၊ ဒါ ပေ မယ့် ၂ ဘက် ကြား နာ ပါ ဦး ( တစ် ဖက် စကား လည်း နား ထောင် ပါ ဦး ၊တစ် ဖက် ကို လည်း စကား ပြော ခွင့် ပြု ပါ ဦး) ပြီး တော့ မှ ကောက် ချက် ချ တာ ပေါ့။ မှား ချင် လည်း မှား မှာ ပေါ့ Human ကိုး ၊ မှား တယ် ဆို ရင် တောင် တစ်ဖက် သတ် ဆုံး ဖြတ် ပြောဆို တာ ထက် စာ ရင်၊ ခံ သာ ပါ လိမ့် မည်၊ ( ဒီ နေ ရာ မှာအ ထွန့် တက် နိုင် ပါ သည် ဥပမာ၊ ဆား သည် ငံ ကြောင်း၊ မီး သည် ပူ ကြောင်း ၂ ဘက် ကြားနာ စရာ မလို ၊ အ စ ရှိ သဖြင့်…၊) တွေ့ ဖူး ပါ သည် အကြောင်းအရာ တစ်ခု အပေါ် စုံ စမ်း မေး မြန်းကြားနာ ခြင်း မရှိဘဲ မိမိ ကိုယ် မိမိ ဆုံးဖြတ် ကောက် ချက် ချ ကာ ငါ မှန် သည် ဟု ဆိုသူ များ တစ်ချိန် မှာ ငါ သည် တစ် ဖက် စကား ကို နား မ ထောင် မိ ရူ် ဆုံး ဖြတ် မှား ခဲ့ ပါ တကား ဟု နောင် တ ရ သူ များ ရှိ ခဲ့ ပါ သည်။ သို့ ဖြင် ရူ် မည် သည့် အကြောင်း အ ရာ သ တင်း ( ဒီ နေ ရာ မှာ တစ်ေ ယာက် တစ် နေ ရာ နေ ရ သော ချစ် သူ၊ရီး စား အ ချင်း ချင်း လည်း ပါ ၀င် သည်၊ (ကိုယ် တွေ့) အပေါင်း အသင်း အ စ ရှိ သဖြင့်) တစ် ဖက် ကြား သတင်း ဖြင့် ဒီ လူ တော့ ကောင်း ပြီ ဒီ လူ တော့ မကောင်း မဆုံး ဖြတ် စေ လို ပါ ကြောင်း တစ် ဘက် ကို သေ ချာ စွာ မေး မြန်း ကြားနာ ပြီး မှ သာ ဆုံး ဖြတ် စေ လို ကြောင်း ။ ကျ နော် အထူး ရည် ရွယ် သည် မှာ ပြသာနာ များ ကို ဖြေ ရှင်းရ သည့် decision maker တွေ ကို ဖြစ် ပါကြောင်း။
ကျ နော် ၏ ကိုယ် ပိုင် အ တွေး ဖြစ် ပါ ကြောင်း၊ လွတ် လပ် ယဉ် ကျေး စွာ သဘော ထား ကွဲ လွဲ နိုင် ပါ ကြောင်း။
နား ၂ ဖက် ပါတာ ၂ ဖက်မျှ ကြားနာဖို့ဆိုလားပဲ။
ကျနော့ အဖို့က ….
၁) မကြားချင်တဲ့ စကားဆို ဟိုဘက်နားက ဝင်၊ ဒီဘက်နားက ထွက်ပဲ။
၂) ဖုန်းပြောတာ ဒီဘက်နားပူရင် ဟိုဖက်နား ပြောင်းပြောတာ။ နားပူသက်သာတာပေါ့။
၃) ကြားချင်တဲ့ စကားဆို ထပ်ပြောခိုင်းပြီး ၂ ခါ နားထောင်တာပဲ။ (ဆိုင်ဆိုင်၊ မဆိုင်ဆိုင်။)
အဲ။ နောက်တစ်ခုက ..
၂ ဘက်မျှပြီး မကြားနာတတ်ရင် ၂ ဖက် ကြား မှာ နာ ရတတ်တယ်ဆိုမျိုးပဲ။
မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါင်းမနည်းတာ ကိုယ်တွေ့။
အတည်အပီတွေကို သူများတွေ ဆွေးနွေးလိမ့်မယ်။
အတည်ဆွေးနွေးဖို့ အနော်က ဉာဏ်မမှီဘူး။
ဆားသည် ငံကြောင်း မီးသည်ပူကြောင်း က truth တွေလေဗျာ …။
assumption ထားရမယ့်အရာမျိုးတွေ ဆိုပါတော့ ..။
မနက်ဖြန်အတွက် Planning လုပ်တယ် အဲ့ .. မနက်ဖန်မနက် နေထွက်ပါ့မလား ဆိုတဲ့
ကိစ္စရပ် အတွက်တော့ ဘယ်သူမှ ထည့်ပလန်မယ် မဟုတ်ဘူးမလား..။
ခေါင်းစည်းမှာပါတဲ့ ဆွေးနွေးမှု ကတော့ (၂ဖက် နားထောင်ပါဆိုတာ)
Conflict Situation ကိုရည်စူးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့.. Conflict ကိုကိုင်တွယ်မယ်ဆို Conflict Mgmt: ပေါ့..
အဲ့ဒီ Framework အတွင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် Hearing ဟာ အဆုံးမဟုတ်
စလုံး ရေ စ အဆင့်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
အဲ့သည့်နောက် အဆင့်တွေ ကျန်ပါသေးကြောင်း..။
လောလောဆယ် ကေ့စ်စတာဒီအဖြစ် ကြေးနီ ကိစ္စကို မြင်ကြည့်နေပါကြောင်း..
(ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်တွေ နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ ပြောတဲ့စကားတွေကို timeline နဲ့ ပြုစုထားရင်
ခုချိန် တော်တော်တန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပြီး နောင်ဆို တန်ဖိုးဖြတ်မရမယ့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်တခု ဖြစ်မှာမို့ပါ …
ဦးဖွက်ကျား ခေါ် ဂီ
စုဆောင်းထားလားဟင် ကြေးနီကိစ္စကို :mgreen:
ယူအက်စ်မှာတော့.. ၂ဖက်ခေါ်ယူကြားနာခြင်းကို.. လူထုကရွေးကောက်ထားတဲ့.. လွှတ်တော်(ကွန်ဂရက်)ကလုပ်တယ်..
ကြားနာပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အရ.. ၀ါးတားဂိတ်အေ၇းအခင်းမှာ သမ္မတနစ်ဆင်ပါနှုတ်ထွက်ရတာပဲ..။
ရေနံတွေဖိတ်တဲ့.. ဘီပီ(နိုင်ငံခြား)ကုမ္ပဏီကြီး.. ဒေါ်လာဘီလီယန်ပေါင်းများစွာလျှော်ရတာပဲ..။
လူထုကရွေးထားသူတွေ(လွှတ်တော်အမတ်တွေ) မို့.. သူတို့ကော်မတီကြားနာတာ ဆုံးဖြတ်တာအတည်ဖြစ်ပါတယ်.။
တိုင်းပြည်က..ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားကြမှာလည်းဟင်င်င်… လို့.. မေးရတော့မှာ..။
အဲဒီလွှတ်တော်မှာ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက စစ်မှန်တဲ့မဲနဲ့ တက်လာသူများပါလဲ သဂျီးမင်း… အစိုးရကရော ပြည်သူက တကယ်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရပါလားခင်ဗျ… ဝိုင်းဆဲဂျကွာ တရုတ်ကူမြူနစ်ကေဒါ ဝမ်ပေါင်စပိုင် သဂျီးဇုတ်ကို….. :chee:
ကြေးနီ ကိစ္စ၊ မြစ်ဆုံကိစ္စ case study လုပ် ချင် ပါသည်၊ လုပ် ဖို့ လည်း လိုအပ် ပါ သည် ကို ဂီ။
ဲမြစ်ဆုံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျ နော် paper ရေး သေးတယ်ဗျ၊ expropriation ပေါ့၊ ဘယ် လိုအခြေအနေ မှာ expropriation လုပ်နိုင် သလဲ ပေါ့။ လျှော် ကြေး ပေး ရ မလား ၊ ပေးစရာ လိုလား မလိုလား၊ ဒါ ပေ မယ့် paper မအောင်မြင်ဘူး၊ ကျနော့် မှာ မြစ်ဆုံကိစ္စ ပတ်သက်ပြီး တိတိ ကျကျ အချက် အလက် မရှိ လို့၊ မြန်မာ နိုင်ငံ ပြန် ရောက် လို့ အ ခြေအနေ ပေး ရင် ကြိူးစားကြည့် ဦးမယ်။ comment များအတွက် ကျေးဇူး ပါ။
သက်သေ ပဲ ဗျ
သက်သေ က အရေးကြီးဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်
ထင်ရှားတဲ့ သက်သေ ရှိပြီဆိုရင်
ပထမ ရုံးချိန်းမှာ ပ လပ် ခံ ရရင်တောင်
နောက်တစ်ဆင့် ထပ်တက်လို့ ရသေးတယ် မှုတ်လား
ဟုတ် ကို ပေ၊ သက်သေ က အရေးကြီးဆုံး ပါ ၊ သက်သေ ဆို တာ လူ ပါ၊ သူ အမှန် ပြော လား မ ပြော လား ဆင် ခြင် ရ မည် Yes this is main ကျနော် လို ချင် တာ အဲ ဒါ၊ Hearing ဆို ဒါ အဲ ဒါ၊ thanks ကို ပေ။
နားဆိုတာ ၂ ခုပါလို့ ၂ ဖက်မျှ နားထောင်ရမယ်။
မျက်စိ ၂ လုံးပါလို့ ၂ ဖက်မျှ ကြည့်တတ်ရမယ်။
ပါးစပ် ၁ ပေါက်ထဲပါလို့ ၁ မျိုးသာ တည်တည်တန့်တန့်ပြောရမယ်။
ရိုးရှင်း၊ ရိုးအီနေပေမယ့် .. လိုက်နာသင့်တဲ့အရာ။